Cabanga ukuthi ukupholisa endlini noma efulethini ayitholakali. Nakanjani kuzodingeka izinkinga ka dampness, iphunga, isifo, abantu engaphathekile, njll ososayensi American bathole ukuthi ngenxa ukupholisa engafanele amafulethi ngonyaka 2006 5000 abantu abayinani elingavamile bafa emhlabeni yizifo ezihlukahlukene ngisho mayelana 10 million uhlushwa yizifo kobukhulu obuhlukahlukene.
Ngakho-ke, kwezokwakha zidinga ukuthi uhlelo of ukupholisa efulethini, emafektri, emahhovisi, amakamelo yokuhlala kanye Umbuso abanye ukukhwezwa ngesikhathi sokwakha. Ingabe ufuna ukuzizwa ekhululekile futhi ekhaya futhi ehhovisi, ufuna ukulala okunempilo, kanye nemiqondo indefatigable brilliant? Nakekela uhlelo oluhle ukupholisa.
Iphuzu elibalulekile e ukuklanywa ukupholisa izakhiwo - ukupholisa isilinganiso, okuyinto inquma kungenzeka (Inani lezikhathi) ohlelweni ihora ukuba esikhundleni wawuqeda wonke lo mqulu umoya egumbini.
Ukupholisa - adjustable emoyeni exchange adingekayo ngikhiphe umoya egumbini qeda, esikhundleni salo kufakwe ngaphandle ahlanzekile silondoloze nomswakama isihlobo kanye lokushisa, ukususa izinto intuthu eyingozi nothuli. Ukupholisa kuleyo ndlu kufanele uhlinzeke yokuhlanzeka namazinga izinga lomoya. Ngaphansi wathandeka kakhulu lo mqondo ubuciko ngokuvamile libhekisela kubantu abasungula uhlelo imishini, amathuluzi kanye namadivayisi ngalezi zinhloso.
Enye MV Clematis ithuthukiswe imfundiso yokuziphendukela komoya ku amapayipi kanye mapayipi. Kodwa ngaphambi ekuqaleni ukupholisa XIX leminyaka lancipha angabiki ke uhlelo ucala kutfutfukisa nokushisa, abangaphelele kakhulu, okwenza supply and qeda air. Kwakungenxa nje nge obhekwe le centrifugal fan ubuchwepheshe liyathuthuka ngokushesha. Isigaba esilandelayo sokuthuthuka - ukubukeka motors kagesi nge variable ngomzuzu izinga. Namuhla ukupholisa endlini kwenziwa ngokusebenzisa izinhlelo ezikhethekile (iqoqo amadivayisi yokudla, ezokuthutha, emoyeni handling nokususwa), okuyinto ihlukaniswa ngesisekelo:
Nge ukunyakaza zemvelo kanye mechanical emoyeni.
Kungene umoya isizinda uhlelo.
exchange Jikelele, eziphuthumayo, intuthu wendawo.
Ductless futhi ducted.
Ukupholisa endlini kuhlelwe nge algorithm athuthukile: kuyinto ukupholisa Amapayipi futhi ekhethiwe, kukhethwe uhlobo uhlelo, iSu yayo ingxenye.
Ukuze induduzo isakhiwo kubalulekile emoyeni hhayi kuphela fresh, izinga lokushisa kwaso, kodwa futhi ijubane ukugeleza komoya. Kule umbono, uyokhululeka kakhulu ukupholisa yemvelo, kodwa akwanele. Ngakho-ke, lapho indlu "kusukela ekuqaleni" kuyadingeka ukwenza air Amapayipi e ezindongeni ikhishi, indlu yokugezela, izindlu zangasese. kwesigaba yayo cross kumele kube ezincane, ngakho udinga ukusebenzisa ukupholisa lokukhanda. Kulokhu, umoya lokushintshisana wenziwa umehluko ingcindezi eyenziwe ejector noma uxhaso.
Ngo emafulethini usakhiwa ukupholisa ngokuvamile bahlela isiteshi mpo yokususa "wasebenzisa" emoyeni futhi fresh notshwala ngokusebenzisa iminyango namafasitela. Air exchange kwenzeka ngenxa umehluko lokushisa nokucindezelwa ngaphakathi nangaphandle ikamelo, isiqondiso amandla womoya. Kodwa ukupholisa zemvelo ngokuvamile alanele ukwakha microclimate, kumelwe ukuphoqelela uhlelo compact kakhulu futhi engabizi. Isixazululo ejwayelekile ukuba le nkinga - conditioning isiteshi noma ophoqelelwe emoyeni ukupholisa.
Ducted air conditioning kuyafaneleka in the amafulethi endaweni enkulu futhi uhlelo eziyinkimbinkimbi. Air conditioning kuthatha emoyeni kusukela ekamelweni, Ihlangana ngayo engenayo esuka emgwaqweni bese uthumela emakamelweni kunethiwekhi ye mapayipi.
Supply and qeda ukupholisa Kwenziwa air kwegazi ngokusebenzisa valve iwindi (phezulu ewindini plastic) noma abalandeli neziteshi ekhaya umoya omncane.
Uhlelo qeda is avame ukusetshenziswa izilungiselelo ezimbonini. Isekela elihle nemingcele Meteorological ezakhiweni kwenjongo ezahlukene futhi, njengoba umthetho, kusukela Izinsimbi air eyanele futhi valve emoyeni, ukuhlunga kanye heater noma isitofu, okokunciphisa umsindo kanye fan Amapayipi futhi uma liqhathaniswa nezibani, ukulawula automatics. Iningi ngokuvamile bahlela supply and qeda uhlelo njengoba exchange jikelele (wonke amagumbi), kanye lendawo (endaweni yokusebenza uketshezi eziyingozi) nge kokusebenza olinganiselayo.
Izisusa Ethnic noma esigodlweni baraque - ukudala ingaphakathi enjalo?
Ukuhlobisa izindonga ngezandla zakhe ukuze ashintshe ukubonakala emagcekeni
Polyurethane foam: Ukucaciswa, abakhiqizi, isicelo, izakhiwo zangempela
Museum of Tula Gingerbread. Tula: izikhangibavakashi
Sizikhathazelani edonsa iqolo?
Ukukhwehlela ngesikhathi sokukhulelwa, imiphumela
Indlela ukukhetha futha ngoba ubisi nemikhiqizo yalo: amathiphu kanye nokubuyekezwa abakhiqizi